Kirada-A-saaxiibka Xiliga 2 Taariikhda Horeeya + Dhammaadka La Sharaxay
Ijaar saaxiibka xilliga 2
Leave a Comment on Kirada-A-saaxiibka Xiliga 2 Taariikhda Hore + Dhammaadka La Sharaxay
Dad badan ayaa rajaynaya Kirada saaxiibka xilliga 2 iyo qaybta u dambaysa Kiro-A-Gabar Gabar ah hadda la soo gabagabeeyey, oo leh Kazuya's jacayl cad oo waligeed ah Chizuru isagoo aad uga muuqda daqiiqadaha ugu dambeeya ee waligeed, waa waqtigii si dhab ah loo qiimeyn lahaa dhamaadka kan caanka ah Naadi oo ogaada marka a Ijaar gabar saaxiib ah Xiliga 2 siidaynta wuu iman doonaa
Chizuru oo la kulmay Kazuya markii ugu horeysay.
Sheekadu waxay ka bilaabantaa jilaageena ugu muhiimsan Kazuya. Waxa uu leeyahay gabadh saaxiib la ah Mami oo qurux badan. Wuxuu jacayl u qabaa iyada qaybta bilawga ah ee Anime. Mami waxay soo muuqan doontaa dhammaan Anime-ga sidoo kale waana qof muhiim ah oo soo noqnoqonaysa.
Sheekada taxanahan waa in ay si qurux badan kuugu caddahay bilowgiiba laakiin qof kasta oo la yaabban showgu waxa uu ku saabsan yahay nin dhallinyaro ah oo lagu magacaabo Kazuya oo sheekada ku bilaabay gabadh aad u qurux badan oo magaceeda la yidhaahdo Mami Nanami.
Ka dib markii laga tagay qalbi jab iyo cidlo Kazuya wuxuu dhex mushaaxaya internetka taleefankiisa markuu la kulmo a Adeegga saaxiibbada kirada. Ma hubo qaybaha kale ee aduunka, laakiin gudaha Russia iyo England, tani ma aha shay (inta aan ognahay).
Fikradda ah in si dhab ah loo kireeyo qof nool si aad u yeelato saaxiibkaaga beenta ah waa mid aad u fog. Laakin gudaha Japan? Haba yaraatee! Haweenkan la jecel yahay waxay bixiyaan adeegyada si loo dareensiiyo nin kasta in la jecel yahay iyo taxanaha ayaa runtii tan sii xoojinaya heer cusub, sahaminta dhammaan siyaabaha kala duwan ee ay tani faa'iido iyo dhibaato u noqon karto bixiyeyaasha adeegga.
Calaamadaha ugu muhiimsan
Marka hore, waxaan leenahay Kazuya, kaas oo loo malaynayo inuu jiro ilaa 21 laakiin u eg inuu yahay 16. Wuxuu leeyahay timo bunni ah oo gaaban iyo indho bunni ah. Waxa uu xidhan yahay shaadh madow oo gaar ah oo ay ku dul taal calaamadda liimiga ah. Waxaan had iyo jeer la yaabanahay in calaamadaas loo malaynayo inay wax u taagan tahay laakiin marnaba ma dhicin.
Isagu waa MC qurux badan laakiin aad ayuu u naxariis badan yahay, (ilaa uu u baahan yahay inuusan noqon) caajis oo run ahaantii ma ahan waxa aan ka rajeynayo sheeko sidan oo kale ah, laakiin waxaa jira waqtiyo uu dhiniciisa dhabta ah ee la jecel yahay ka soo iftiimayo.
Marka labaad, waxaan leenahay quruxda Chizuru, way ka yar tahay Kazuya Waxaan aaminsanahay laakiin sida iska cad ayaa wax badan u socota nafteeda. Quruxdeeda iyo soo jiidashada ay leedahay ayaa ah waxa soo jiitaan daawadayaasha ugu badan marka hore.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa sidoo kale jira sifooyin badan oo ay leedahay kuwaas oo ka dhigaya mid aad loogu riyaaqo Naadi, iyo dabeecad aan hubaal ka heli karo haddii ay iyadu ahayd MC.
Xarfaha-hoose ee Kiro-A-Gabar Gabar ah dhamaantood way ku fiican yihiin waxa ay tahay inay sameeyaan. Maan jeclayn dabeecadda ayeeyada ka weyn oo waxaan mooday inay si xad dhaaf ah u isticmaaleen. Sidoo kale, Kazuya's saaxiib waxa uu ahaa uun guul-daraystay. Ma fahmin sida uu xitaa dadka sidan oo kale ula xiriiri karo noloshiisa. Saaxiibkiis ugu wanagsan ayaa si cad u xoqay isaga. Taasina waa malaha sababta uu u maleeyay helitaanka a Gabadha saaxiibka ah ee kirada ah waxay ahayd fikrad wanaagsan marka hore. Oo dhan run ahaantii kaliya in ay soo jiitaan saaxiibkii.
Mami Dhab ahaantii maaha nooca gabadha aad runtii jeclaan lahayd inaad ag joogto. Gaar ahaan maaha sida lammaanahaaga. Markaa marka ay ka tagto nin kale waxay ku noqotaa yaab. Taxanaha danbe waxaad fahmi doontaa sababta ay uga tagtay iyo sababta dabeecadeeda u qaboow.
Hadda dhamaadkii Kiro-A-Gabar Gabar ah uguma dhowayn sida ay u fiicnaan lahayd fikradayda. Waxaas oo dhan ka dib iyo dib u soo noqoshada jilayaasha ugu muhiimsan weli waxba ma helin. Dhammaan muuqaalladan ku lug leh waxqabadyada la sameeyay si loo dhigo jilayaashayada boosas si ay isugu soo dhawaadaan sida goobta doonta oo labaduba Chizuru iyo Kazuya ku dhawaad ​​in ay qarqiyeen dhammaan nooc kasta oo dareemay macno darro.
miyuu Chizuru dareen qoto dheer u leh Kazuya?
Sababta tani waa taas Kazuya waxa kaliya oo uu ku fahmaa sida uu runtii dareemayo Chizuru dabadeed si degdeg ah isku dayo inuu dib u celiyo oo u ciyaaro si kaftan ah. Maxaa khasaara. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku dhammaanaysaa Kazuya sida iska cad in uu weli u hayo dareenkiisa qoto dheer ee ku duugan Chizuru ka dib markii ay ku dhowaatay inay faahfaahinta oo dhan u daadiso iyada iyo iyada Chizuru weli midna ma caqli badan (sidaas darteed waxaan u malaynayaa).
Kazuya arkaa Ruka Sarashina
Waa nooc yar oo dhagax-qaraar ah. Ma garanayno haddii Kazuya ugu danbeyn qiran doono. Waxaan rajeynayaa? Waxaan u malaynayaa in taasi ay tahay waxa ku dhammaanaya. Dardaaran Chizuru waligaa sida loo ogaado Kazuya run ahaantii isaga ku saabsan? Oo doono Kazuya waligaa si dhab ah u qiran? Haddii xilli cusub uu imanayo, waxa hubaal ah in aanu arki doono in tani run noqon doonto iyo in kale. Sii wad akhri si aad u ogaato sababta.
Kiraynta-A-saaxiibkaa ma heli doontaa xilli 2?
Chizuru badbaadi Kazuya
Markaa dabcan halkan uma joogno inaan dammaanad qaadno Xilliga Labaad ee Kiro-A-Gabar Gabar ah, taasi maahan waxa aan samayno. Taa beddelkeeda, waxaan jecelnahay inaan ku siinno jawaab ku saleysan baaritaankeenna taxanaha ah. Hoos waxaa ku yaal tiro yar oo sababo ah oo aan u aaminsanahay Xiliga 2 ee Kiro-A-Gabar Gabar ah waxay u badan tahay. Haddaba bal aan u dhuuxno sababaha a Kiro-A-Gabar Gabar ah Xilliga 2 waa suurtagal.
First of dhan, ka Manga, oo uu qoray Reiji Miyajima weli waa socotaa, cutubyo cusubna waa la daabacay xitaa sida ugu dhow ee Ogosto 21 ee sanadkan. Markaa Manga wali waa socotaa sheekaduna wali ma dhamaan.
Ilaa hadda, waxaa jiray agagaarka cutubyada 50 oo ka mid ah Manga habaysan. Dhab ahaantii Anime wuxuu ku dhamaanayaa meel ku dhow cutubka 50. Ilaa hadda waxaa jira 162 cutub oo hadda la daabacay. Tani waxay ka dhigan tahay in ay jiraan wax ka badan labanlaab qalabka isha ee lagu hagaajinayo. Markaa ma jirto sabab dhab ah a Kiro-A-Gabar Gabar ah Xiliga 2-aad macquul ma aha maadaama ay si fudud ula qabsan karto.
Kiro-A-Gabar Gabar ah waa Anime aad caan u ah Crunchyroll. Lacagta xilli 2 ay sameyn karto way adkaan doontaa in la iska indho tiro. Wixii shirkad kasta oo wax soo saar ah oo ah. The Manga sifooyinka caanka ah Majaladda Shonen ee toddobaadlaha ah ee Kodansha. Kani waa joornaal, oo lagu soo bandhigay goobo badan oo warbaahineed oo adduunka oo dhan ah.
Sababaha kor ku xusan aawadood, ma aaminsanin taas oo kaliya Kiro-A-Gabar Gabar ah xilli 2 waa suurtagal laakiin aad bay u badan tahay marka la eego duruufaha. Runtii waa arrin waqti ku filan.
Dhaqaalaha Japan ma uusan gaabin sababo la xiriira masiibada COVID-19, laakiin taa beddelkeeda si dhakhso ah ayey u soo kabatay. Kiisaska ayaa hoos u dhacaya maalinba maalinta ka dambeysa waxaana la helay daaweyn cusub. Waxaan rajaynaynaa, tani waxay la macno tahay in wakhtiga kirada saaxiibka ah 2 taariikhda la sii daayo ay aad uga dhakhso badan tahay anaga ama aad u malaynayso.
Goorma ayay Ijaaraysaa-A-saaxiibka-Gabadh Xiliga 2 Premier?
Chizuru is baratay Kazuya's saaxiibadaa
Waxaan qiyaasi doonnaa in marka la eego xayeysiinta hadda jirta ee ku xeeran Rent-A-saaxiibteed xilli 2 uu mar horeba si fiican u socday, iyadoo wax-soo-saarka iyo wax-soo-saarka durbaba ay ku jiraan ficil aan fileyno. A Kiro-A-Gabar Gabar ah Xilliga 2 wuxuu iman karaa meel kasta inta u dhaxaysa Jan 2022 ama wax badan ka dib sanadka 2022.
Way adagtahay in loo sheego sida Warshadaha anime waa mid aan la saadaalin karin oo mararka qaar bandhigyada caanka ah waligood ma arkin xilli labaad iyadoo aad uga duwan tahay bandhigyada aadan weligaa u maleyneynin inaad xitaa maqli doonto jumlada "xilliga 2" heli 1, 2, iyo xitaa 3 xilli oo dheeraad ah. Sida aynu hore u soo sheegnay, ma aha oo kaliya fursadaha a Kiro-A-Gabar Gabar ah aad bay u sarreeyaan, laakiin baahida loo qabo.
Waxaan filayaa in dad badani ay rabaan inay arkaan dhammaad farxad leh Chizuru & Xiriirka Kazuya. Sida oo kale Mugi iyo Hanabi's xiriirka in Rabitaanka xumaanta, mid kale Riwaayad Jacayl Waxaan daboolnay boggan in yar ka dib, taageerayaashu waxay rabaan inay arkaan ugu yaraan gabagabo. Waxaana rajeynayaa, Kirada-A-saaxiibka Anime arki doona xilli kale.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu kaa caawiyay inaad fahamto kartida Ijaar gabar saaxiib ah xilli 2 taariikhda la sii daayo iyo haddii xilli 2 ee Ijaar gabar saaxiib ah dhab ahaantii waa suurtagal. Sida had iyo jeer tani waa waxa aan ujeedo maqaalladan.
Chizuru waxay ka tarjumaysaa falalkeeda
Fadlan tixgeli inaad hubiso dukaankayaga si aad u soo qaadato qaar asal ah Anime merch iyo caawimaad taageero our site qorayaasha iyo maamulayaasha. Waad ku mahadsan tahay akhrinta, waxaan rajeyneynaa inaad ka heshay maqaalkan, waxaan kuu rajeyneynaa wanaag.
Gelitaan Hore Miss Kobayashi's Dragon Maid - daqiiqado qosol leh
Gelitaanka Xiga Ms Pyuiyi waxay ka nixisay taageereyaal daanka ka tuuraya Post Instagram cusub